Wararkii ugu dambeeyay qaraxyo ismiidaamin ah oo lala beegsaday Hotel Sahafi iyo wali rasaas laga maqlayo gudaha Hotelka | Weheliye Online
Wararkii ugu dambeeyay qaraxyo ismiidaamin ah oo lala beegsaday Hotel Sahafi iyo wali rasaas laga maqlayo gudaha Hotelka
Faah faahin ayaa ka soo baxaya qaraxyo ismiidaamin oo daqiiqado u dhaxeeyay oo goor dhow ka dhacay agagaarka Isgoyska KM4, iyadoo qaraxyada oo ahaa gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay lagu kala weeraray Hotelka Saxafi iyo Xarunta CID oo isku dhow.
Qarax koowaad ayaa ka dhacay afaafka hore ee barta Koontarool ee Xarunta CID, halka qaraxa labaad uu ka dhacay afabafka hore ee iridka Hotelka Saxafi.
Illaa iyo hadda si rasmi ah looma oga khasaaraha, iyadoo la soo sheegayo dhimasho iyo dhaawac oo ka dhalatay labadii qarax ee u horeeyay ee ka dhacay wadada laamiga hor mara Xarunta CID iyo Hotelka Saxafi.
Previous articleHuddersfield Town ayaa soo gabagabeysay guusheedii ugu horeysay ee ay garoonkeeda ku gaarto Premier League xilli ciyaareedkan iyadoo 1-0 kaga badisay Fulham.
Next articleTabbabarihii hore ee xulka qaranka Soomaaliya ee kubadda Kolayga macallin Cabdi Maxamed Cige oo ku magac dheeraa Cabdi Dheere oo ku geeriyooday magaalada Toronto ee dalka Canada